General Tareedisho oo faah faahiyay hawlgalka ka socda Hirshabelle | Dhacdo
Home Wararka Maanta General Tareedisho oo faah faahiyay hawlgalka ka socda Hirshabelle
General Tareedisho oo faah faahiyay hawlgalka ka socda Hirshabelle
Taliyaha Qaybta 27aad ee Ciidanka Xoogga Dalka, General Axmed Maxamed Tareedisho ayaa waxa uu ka xog waramay hawlgalka militari ee xilligan ka socda Hirshabelle.
Ciidanka Xoogga Dalka ayaa Sabtidii dib u bilaabay hawlgalka Shabaabka looga saarayo qaybo ka mida deegaanada Hirshabelle, si amniga wax looga qabto.
Taliyaha Qaybta 27aad ee Ciidanka Xoogga Dalka ayaa sheegay in hawlgalka lagu furay wadooyin ay jidgooyo u taalay maleeshiyada Al Shabaab, lagana soo saaray miinooyin ay ku aaseen.
“Ciidamadu waxay ku guulaysteen inay isku furaan wadooyin badan oo xiriiriya Gobolada Hiiraan, Shabeellaha Dhexe iyo Banaadir oo Al Shabaab ay hore u dhigteen jidgooyooyin. Ciidamada ayaa sidoo kale soo saaray miinooyin ay wadada ku aaseen Shabaab.” Ayuu yiri Taliyaha.
Waxa kaloo uu sheegay in hawlgalka lagu dilay afar iyo labaatan ka tirsanaa mintidiinta Al Shabaab, isagoo intaa ku daray in hawlgalku uu sii socon doono.
General Tareedisho ma soo hadalqaadin waxyeelada ciidamada ka soo gaartay hawlgalka ka socda deegaanada Hirshabelle, ha yeeshee afar askari ayaa ku dhimatay qarax shalay mid ka mid ah gaadiidka ciidamada lagula eegtay inta u dhaxeyso deegaanada Biyo-cadde iyo Ceelbaraf ee Gobolka Shabeellaha Dhexe.
Yoolka laga leeyahay hawlgalkan ayaa ah in meesha looga saaro culeyska, ay xilligan maleeshiyada Al Shabaab ku hayaan Hirshabelle, xilli Hirshabelle ku guda jirto soo xulista Xildhibaanada Baarlamaanka 2aad, una diyaargaroobeyso Doorashada Madaxtooyada.
Previous articleGeneral Xijaar oo kormeeray barro kontorool oo laga sameeyay Muqdisho
Next articleCismaan Macalin Xasan oo loo magacaabay Agaasimaha Madaxtooyada Galmudug